सलमान र ऐश्वर्या पुन: एकसाथ आउलान ? « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
सलमान र ऐश्वर्या पुन: एकसाथ आउलान ?
बेला बखतमा बलीउड एउटा कुराले राम्रै तात्ने गर्छ, त्यो हो प्रेम सम्बन्ध । एउटा चलचित्रमा साथ साथ काम गरेपछि देखी एक साथ कुनै कार्यक्रममा चलचित्रका नायक नायिका देखिए भने भोलीबाट उनीहरुको अफयरको हल्ला चल्न थाल्छ । तर कतिको ति हल्ला पनि सत्य हुन्छन् भने कतिको प्रेम सम्बन्धको कुरा हल्लामा मात्र सिमिति भएको हुन्छ ।
त्यस्तै बलीउडका एक जमनाको चर्चित प्रेम जोडी हो सलमान खान र ऐश्वर्या राय । हो, यो जोडीको प्रेम चर्चा एक समय खुबै भयो । अहिले पनि मिडियामा यी दुइको प्रेम चर्चाको समाचार आइरहन्छ । यो जोडीको प्रेम कथा संजयलिला भंसालीको चलचित्र ‘हम दिल दे चुके सनम’ को सेटबाट शुरु भएको थियो । १९९४ को विश्व सुन्दरीको ताज पहीरिन सफल ऐश्वर्या रायको सुन्दरतामा बलिउडका ब्याड ब्वाय सलमान खान चुर्लुम्मै डुबे ।
यो जोडी लगभग ३ बर्ष सम्म प्रेममा रहयो । आफ्नो अभिभावकको स्विकृती नहुँदा नहुदै पनि ऐश्वर्या आफ्नो प्रेमको पक्षमा अडिग रहिन । तर यो ऐतिहासीक प्रेम सम्बन्ध सधै उस्तै रहेन । जब सलमानले ऐश्वर्या माथी शंका गर्न थाले तबदेखी उनीहरुको सम्बन्ध औपचारिक रुपमै टुङ्गियो । यसपछि, यी दुइले एक अर्काको बारेमा कुरा समेत गरेका छैनन् । तर, उनले सलमान खानसँग फेरि चलचित्रमा काम गर्ने संभावना लगभग सकिएको छ ।